Malunga nathi - Hongyuan Wheel Group Co., Ltd.
Iqela lamavili laseHongyuan
Ngaphandle kweVili leNdlela Ishishini leMveliso eliPheleleyo leShishini
Iqela lamavili laseHongyuan (HYWG) lasekwa ngo-1996 kunye nomanduleli walo njengo-Anyang Hongyuan Steel Co., Ltd (AYHY). I-HYWG ngumenzi oqeqeshiweyo wentsimbi kunye nongqameko ogqityiweyo kuzo zonke iintlobo zoomatshini abangaphandle kwendlela, ezinje ngezixhobo zokwakha, oomatshini bemigodi, iifolokhwe, izithuthi zeshishini.
Emva kweminyaka engama-20 yophuhliso oluqhubekayo, i-HYWG iye yaba yinkokeli yehlabathi jikelele kwi-rim yentsimbi kunye nakwiimarike ezipheleleyo, umgangatho wayo uqinisekiswe yi-OEM ye-Caterpillar, iVolvo, uJohn Deere kunye ne-XCMG. Namhlanje i-HYWG ine-asethi engaphezu kwe-100 yezigidi zeedola, abasebenzi abali-1100, amaziko amahlanu okuvelisa ngokukodwa i-OTR 3-PC kunye ne-5-PC rim, umda we forklift, irim yoshishino kunye nentsimbi yomphetho.
Umthamo wemveliso yonyaka ifikelele kwiirim ezingama-300,000, iimveliso ezithunyelwa kumazwe angaphandle eMntla Melika, iYurophu, iAfrika, iOstreliya neminye imimandla. I-HYWG ngoku ngumvelisi omkhulu we-OTR e-China, kwaye ijonge ukuba ngumenzi ophezulu we-3 OTR emhlabeni.
Ekuqaleni njengomvelisi wecandelo elincinci lesinyithi, i-HYWG yaqala ukuvelisa i-rim yesinyithi ukusukela emva kweminyaka yoo-1990, ngo-2010 i-HYWG yaba yinkokheli yentengiso kwiloli yentsimbi kunye ne-OTR yentsimbi, isabelo sentengiso safikelela kuma-70% nama-90% e-China; iarim yentsimbi yeerim yathunyelwa kumazwe angaphandle kubavelisi bomphetho wehlabathi njengeTitan kunye neGKN.
Ukusukela ngo-2011, i-HYWG iqalile ukuvelisa i-OTR igqibile, yaba ngumthengisi ophambili we-OEM jikelele njengeCaterpillar, Volvo, John Deere kunye ne-XCMG. Ukusuka kwi-4 "ukuya kuma-63", ukusuka kwi-1-PC ukuya kwi-3-PC kunye ne-5-PC, i-HYWG inokunika uluhlu olupheleleyo lweemveliso ezingqonge izixhobo zokwakha, oomatshini bemigodi, imoto yezemizi-mveliso kunye nefolokhwe. Ukusuka kwi-rim yentsimbi ukuya kwi-rim igqityiwe, ukusuka kweyona fim yincinci ye-forklift ukuya kweyona mininzi inkulu yezemigodi, i-HYWG icinyiwe kwiNdlela yeRhwebo yoShishino lwaMashishini onke.
Singavelisa zonke iintlobo zeerimu ze-OTR kubandakanya i-1-PC, i-3-PC kunye neerifili ze-5-PC. Ubungakanani ukusuka kwi-4 "ukuya kwi-63" yezixhobo zokwakha, oomatshini bemigodi, iifolokhwe, kunye nezithuthi zeshishini.
Umzi mveliso wonke
I-HYWG ivelisa zombini intsimbi kunye nongqameko olupheleleyo, sivelisa yonke into esendlwini kuzo zonke iirim ezingaphantsi kwama-51 ”.
Iimveliso ze-HYWG ziye zavavanywa kakuhle kwaye zavavanywa ngabathengi abakhulu be-OEM njengoMqolomba, uVolvo, uJohn Deere kunye neXCMG.
R & D eyomeleleyo
I-HYWG inamava atyebileyo kuyilo kunye nolawulo lomgangatho wezinto, i-welding kunye nokupeyinta. Ilebhu yethu yovavanyo kunye nesoftware ye-FEA ihambele phambili kumzi mveliso.
Abathengi bethu abaphambili
Sisebenzisa iwelding oomatshini abakumgangatho wehlabathi kunye nenkqubo yolawulo lweemoto ezizenzekelayo ukuqinisekisa umgangatho ophezulu kunye nokuzinzileyo kwe-welding. Sikwazise ujongano olunzulu phakathi kwesiseko se-rim, i-flange kunye ne-gutter ukuze ubenomgangatho we-welding.
Umgca wethu we-e-coating unikezela eyona nto iphambili yokutyabeka ehlangabezana neemvavanyo zeeyure ezichasene nerusi, umbala kunye nepeyinti zihlangabezana nomgangatho ophezulu we-OEM njengeCAT, Volvo noJohn Deere. Singanikezela ngamandla omabini kunye nepeyinti emanzi njengeepeyinti eziphezulu, kukho iintlobo ezingaphezu kwe-100 zemibala onokukhetha kuzo. Sisebenzisana nabathengisi bepeyinti abaphezulu njengePPG kunye neNippon Paint.
I-HYWG ibeyinkampani ekhokelayo kushishino lwe-OTR malunga netekhnoloji, imveliso kunye novavanyo. Kukho izinto ezingaphezu kwe-200 zobunjineli phakathi kwabasebenzi abangama-1100 bebonke ababandakanyekayo kuphuhliso, imveliso kunye nenkxaso yobuchwephesha kwicandelo lesinyithi, intsimbi yomphetho kunye neemveliso ezipheleleyo.
I-HYWG lilungu eliphambili leKomiti yeSizwe yoMatshini wokuSusa uMhlaba, ibisungula kwaye ithatha inxaxheba ekumiselweni komphetho we-OTR kunye nongqameko lwentsimbi kwinqanaba lesizwe. It ongumnini amalungelo awodwa omenzi wechiza yesizwe ezingaphezu kwe-100, kunye nezatifikethi ISO9001, ISO14001, ISO18001 kunye TS16949.
Isoftware ye-FEA (Uhlalutyo lwe-Element Element) yenza ukuba uvavanyo lwenqanaba lokuqala lube nokwenzeka, uvavanyo lokulwa nerusi, uvavanyo oluvuzayo, uvavanyo lokuqina kwentsimbi kunye nezixhobo zovavanyo lwezixhobo zenza ukuba i-HYWG ibe nakho ukuqhuba kuvavanyo kwishishini.
Iqela lamavili laseHongyuan lavula umzi-mveliso omtsha e-Jiazuo Henan kwimizi-mveliso kunye neefolokhwe.
Iqela lamavili laseHongyuan lafumana i-GTW eyayingumvelisi onobungcali wokuvelisa izixhobo ze forklift.
Iqela lamavili laseHongyaun lavula umzi-mveliso ophezulu we-OTR e-Jiaxing Zhejiang.
Iqela lamavili laseHongyuan lavula umzi-mveliso wokuqala we-OTR e-Anyang Henan.
Icandelo lenkampani ye-AnYang Hongyuan liqale ukuvelisa intsimbi ye-truck rim kunye ne-OTR.
Kwiminyaka engama-20 yophuhliso oluqhubekayo i-HYWG iye yaba ngumenzi omkhulu we-OTR e-China, kule minyaka ili-10 izayo i-HYWG ijolise ekubeni ngumenzi we-3 OTR ophezulu emhlabeni. Sakha ukuba sibe yiNdawo yeRhwebo yoShishino lweMveliso yoThutho.
Yiba ngumhlaba jikelele ngaphandle kwendlela ehamba phambili.
Yenza amaxabiso kubathengi, yenza imeko yokuba lilungu labasebenzi, uthathe uxanduva eluntwini.
Ukusebenza nzima, ingqibelelo nokunyaniseka, ukuphumelela intsebenziswano.
Ezinye zeeprojekthi zabathengi bethu
Inxalenye ye-2018 eCologne umboniso wetayara eJamani.